Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Oo XOOGAG Dano Gaar Ah Leh Ku Eedeeyey Mudaharaadyadii Ka Dhacay WARDHEER - Jigjiga Online
HomeSomalidaMadaxweynaha Dawladda Deegaanka Oo XOOGAG Dano Gaar Ah Leh Ku Eedeeyey Mudaharaadyadii Ka Dhacay WARDHEER
Jigjiga (Jigjigaonline) – Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar ayaa markii ugu horreysay ka hadlay mudaharaadyo dhawaan ka dhacay magaalada Wardheer, waxaana uu ku eedeeyey inay ka dambeeyaan xoogag dano gaar ah ka dhex arkay kicinta shacabka.
Magaalada Wardheer ee Gobolka Doollo ayaa waxa maalintii Ciiddii ka dhacay mudaharaad sababay dhaawac fudud oo soo gaadhay dhawr qof oo rayid ah, waxaase dano gaar ah uga faa’iidaystay ururro siyaasadeed iyo shaqsiyaad ku caan baxay iska-horkeenka umadda kuwaas oo siyaabo kala duwan uga hadlay.
Ururka ONLF oo warbaahinta la hadlay ayaa dawladda deegaanka ku eedeeyey in waxyeello loo geystay shacabkii mudaharaadayey, sidoo kalena shaqsiyaad xilal ka doonayey xukuumadda Madaxweyne Mustafe Cagjar oo markii ay waayeen cay iyo aflagaaddo la fadhiistay Addis Ababa ayaa marin habaabin iyo warar been ah ka faafinayey mudaharaadkaas kooban.
Haddaba Madaxweyne Cagjar oo u warramay BBC Somali, ayaa waxa uu ku eedeeyey in mudaharaadkaas ay dhex boodeen xoogag kala duwan oo doonayey inuu qalalaase dhaco si ay faa’iido uga helaan siyaasadda, waxaanu yidhi: “Wararka laga sheegayo badankoodu waa been. Waxa ka dhacay wuxuu ahaa tabashooyin ka imanayey dad wax ka tabanayey sidii maamulka loo kala beddelay, taasina waa wax dabiici ah oo iska caadi ah, laakiin wax dhex booday xoogag kala duwan oo u arkayey in si ay faa’iido uga helaan siyaasadda inuu qalalaase dhaco.”
Madaxweynuhu waxa uu sheegay inay layaab tahay in dadka qaar ka hadlayaan xasuuq xilli aanu hal qofna ku dhimanin mudaharaadyadaas, waxaanu yidhi: “Shaqaaqooyinkaa shan qof ayuu dhaawac aad u sahlan gaadhay, mana jirin cid ay xabbad ku dhacday. Qof dhagax lagu dhuftay iyo gabadh lagu dhuftay budh iyo waxyaabo noocaas ah. Waxa layaab leh in laga hadlayey xasuuq, laakiin hal qof ma dhimanin.”
Mudane Cagjar, waxa uu sheegay in mudaharaadyadu ay wax caadi ah yihiin, laakiin loo baahan yahay in laga heshiiyo nidaamka loo marayo, waxaanu yidhi: “Mudaharaadku inuu dhaco waa wax caadi ah oo waddanka oo dhan ayey ka jirtaa. Mar haddii dadku ay hadli karaan oo ay wax taban karaan, inuu mudaharaad dhacaa wax layaable maaha, wax ay tahay in laga dayriyaana ma jiro. Nidaamka kaliya ee ay tahay in loo maro mudaharaadada iyo tabashooyinka ayuun baa muhiim ah in laga heshiiyo.”